LAER, एक ब्याट्री केस जसले तपाईंको सबै ग्याजेटहरू चार्ज गर्दछ: म्याकबुक र आईफोन | म म्याकबाट हुँ
यो घर र कार्यालय बाहिर काम गरिरहेको देख्नु सामान्य छ। के अधिक छ, पेशेवरहरूको संख्या स्वतंत्र बढ्दै छ। तर जहिले पनि कार्यशील हुन, तपाइँ पूरा दिन सामना गर्न तयार हुनुपर्दछ काम र मुख्य बाधा मध्ये एक तपाईंको मुख्य कार्य उपकरणहरूमा पर्याप्त स्वायत्तता पाउन सक्षम छैन (ल्यापटप र मोबाइल हेर्नुहोस्)। हामीलाई थाहा छ कि दुबै म्याकबुक ल्यापटप र आईफोनहरू यस सम्बन्धमा सबैभन्दा प्रभावकारी छन्, तर यो कहिल्यै पर्याप्त हुँदैन। यी आवश्यकताहरूबाट - र अरूहरू जन्मेका छन् LAER एकीकृत ब्याट्री केस.
यो क्रसबडी बैग यो ल्यापटप, साथै ठूलो क्षमताको ब्याट्री यातायातको लागि ठाउँ भित्र रहन्छ। LAER एक सुन्दर कभर त्यो पनि यो समर्थनको रूपमा सेवा दिनेछ जब हामी हाम्रो ल्यापटपलाई समर्थन गर्न हाम्रो खुट्टा प्रयोग गर्दछौं भने बढी आरामसँग कार्य गर्न सक्षम हुनेछ.
अर्कोतर्फ, केसले ब्याट्री मात्र प्रदान गर्दैन जसले तपाईंलाई USB-C जस्ता भौतिक जडानहरू प्रयोग गरेर कम्प्युटरहरूमा जडान गर्न अनुमति दिन्छ (एप्पल कम्प्युटरहरूको मामलामा)। भर्खरै, तपाईलाई थाहा छ, एप्पलले आईफोन and र आईफोन एक्स सुरूवात गर्‍यो। र यी सबै मोडेलहरूको एक महान नवीनता भनेको उनीहरूले क्यूआई प्रविधि प्रयोग गरेर वायरलेस चार्जिंग थप गरे। त्यसो भए, लायर केसको बाहिरी ठाउँमा हामीसँग क्यूआई आधार हुनेछ जहाँ हामी राख्छौं स्मार्टफोन एप्पल बाट र यो केबलहरू प्रयोग नगरी चार्ज हुँदैछ।
त्यस्तै गरी, LAER कन्फिगर योग्य छ र तपाइँ यसको प्रयोगमा निर्भर गर्दछ अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ ग्याजेटहरू त्यो दिन तपाईं बोक्नुहुन्छ। हामी यो किन भन्छौं? ठिक छ, किनकि ब्याट्रीमा हटाउन योग्य मोड्युलहरू छन् र तपाईं अधिक वा कम क्षमता थप्न सक्नुहुन्छ; त्यो हो, प्याकेजaको साथ छ Mill,००० मिलिअम्प मोड्युल साथ साथै २०,००० मिलिम्प मोड्युल.
अन्तमा, यस सुस्त केस एक प्रोजेक्ट हो जुन ईन्डिगोगोमा शुरू भयो। र गत जुलाईमा वित्त अवधि समाप्त भयो। अन्तमा, यो आवश्यक थियो के १ 150०% भन्दा बढी स collect्कलन गर्न सम्भव थियो। पहिलो एकाईहरु अर्को मार्च आउँछन्। Y यसको मूल्य १ 150० डलरमा शुरू हुन्छ र सबैभन्दा सुसज्जित संस्करणको लागि १ 185 XNUMX डलरमा जान्छ.
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » म्याक कम्प्युटरहरू » Accesorios » LAER, एक ब्याट्री केस जुन तपाईंको सबै ग्याजेटहरू चार्ज गर्दछ: म्याकबुक र आईफोन
कसरी तपाइँको लगइन keychain पासवर्ड परिवर्तन गर्न